MinSayYar - Page 1601 of 1611 -
မော်ဒယ်မလေးတွေကို ပိန်ပိန်သွယ်သွယ်ခန္ဓာကိုယ်လေး ရရှိအောင်လို့ ကြိုးစားအားထုတ်နေသူများအတွက်
အားလုံးပဲ မင်္ဂလာပါနော်။ ဒီတခါမှာတော့ ကိုယ်အလေးချိန်ကျဖို့ ကြိုးစားနေသူတွေအတွက် နည်းလမ်းကောင်းတွေကို မျှဝေပေးချင်ပါတယ်။ သင်လုပ်နေတဲ့ ကိုယ်လက်လေ့ကျင့်ခန်းမှာ အခုဖော်ပြမယ့်နည်းလမ်းတွေကို ဖြည့်စွက်ပြီး လုပ်ပေးလို့ရပါတယ်နော်။ ဒါပေမယ့် တစ်ခုအကြံပြုချင်တာက ကိုယ်အလေးချိန်ကျဖို့ဆိုရင် အခုဖော်ပြမယ့် နည်းလမ်းတွေသာမက ကိုယ်လက်လေ့ကျင့်ခန်းတွေလည်း လုပ်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ၁။ သင့်ရဲ့ နေ့ရက်ကို သံပယိုရည် တစ်ခွက်သောက်ပြီးစတင်လိုက်ပါ မနက်အိပ်ယာနိုးနိုးချင်း သံပယိုရည်ကို ရေနွေးတစ်ခွက်ထဲ ညစ်ထည့်ပြီး သောက်ပေးလိုက်ပါ။ ပျားရည်နည်းနည်းထည့်နိုင်ပါတယ်။ ဗိုက်ထဲမှာ ဘာအစာမှမရှိခင်မှာသောက်ပါ။ ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းက အဆိပ်အတောက်တွေကိုဖယ်ရှားပေးနိုင်သလို ဗီတာမင် ပါဝင်မှုများလို့ ဇီဝဖြစ်စဉ်ကိုကောင်းမွန်စေပါတယ်။ ၂။ ပန်းသီးရှလကာရည် သောက်မယ် ပန်းသီးရှလကာရည်ဟာ သင့်ခန္ဓာကိုယ်က အဆီတွေကို ကျစေပြီး အစာချေစနစ်ကိုကောင်းမွန်စေပါတယ်။ ပန်းသီးရှကာရည် စားပွဲတင်ဇွန်း ၂ ဇွန်းလောက်ကိုရေတစ်ခွက်နဲ့ ရောပြီး သောက်ပေးပါ။ တစ်ရက်ကို အစာမစားခင် ၂ ကြိမ်ကနေ […]
နုပျိုစိုပြေတဲ့ အသားအရေကို ထိန်းသိမ်းထားနိုင်စေမယ့် နည်းလမ်းလေးများ
အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါနော်။ သင့်မျက်နှာအသားအရေကိုပဲဖြစ်ဖြစ် ခန္ဓာကိုယ်အသားအရေကိုပဲဖြစ်ဖြစ် ဂရုစိုက်ဖို့လိုပါတယ်။ အရေပြားကလည်း သင့်ခန္ဓာကိုယ်အတွက် အရေးပါလှတာမို့ အသားအရေကို ဂရုစိုက်တာမမှားပါဘူး။ ဒိန်ချဉ်နဲ့ သခွားသီးပါဝင်ပစ္စည်း ဒိန်ချဉ် စားပွဲတစ်ဇွန်း ၁ ဇွန်း သခွားသီး တစ်ခြမ်း သခွားသီးကို ကြိတ်စက်နဲ့ ကြိတ်လိုက်ပြီး သေချာညှက်အောင်လုပ်ပါ။ ပြီးရင် အဲဒီထဲက စားပွဲတင်ဇွန်းတစ်ဇွန်းကိုယူပြီး ဒိန်ချဉ် စားပွဲတင်ဇွန်း ၁ ဇွန်းနဲ့ရောပါ။ ပြီးသွားရင် သင့်မျက်နှာနဲ့ လည်ပင်းကိုလိမ်းပေးလိုက်ပါ။ ၁၅ မိနစ်၊ မိနစ် ၂၀ လောက်ထားပြီး ရေဆေးချလိုက်ပါ။ ခရမ်းချဉ်သီး ခရမ်းချဉ်သီးအရည်စားပွဲတင်ဇွန်း ၂ ဇွန်းကို သင့်မျက်နှာနဲ့ လည်ပင်းပေါ် လိမ်းလိုက်ပါ။ ပြီးရင် ခြောက်အောင်ထားပြီး ရေဆေးချလိုက်ပါ။ တစ်ပတ်ကို ၃ ကြိမ် ၄ ကြိမ်လုပ်နိုင်ပါတယ်။ တစ်နေ့တာအသားအရေထိန်းသိမ်းမှု တစ်နေ့ကို မျက်နှာ […]
မိန်းကလေးပရိတ်သတ်ပိုများတဲ့ SNSD အဖွဲ့ခေါင်းဆောင် Taeyeon ရဲ့ ဖက်ရှင်များ
[Zawgyi] တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့ နာမည်ကြီးအဆိုတော်များထဲမှ တစ်ယောက်အပါအဝင်ဖြစ်တဲ့ Taeyeon ဟာဆိုရင် SM Entertainment မှစင်တင်ခဲ့သော Girls’ Generation အဖွဲ့၏ခေါင်းဆောင်နှင့် အဓိကအဆိုတော်တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ အဖွဲ့သီချင်းများနှင့် တကိုယ်တော်တေးစီးရီးများအပြင် နာမည်ကြီးဒရမ်မာဇာတ်လမ်းတွဲများ၊ ရုပ်ရှင်ကားများတွင်လည်း ဇာတ်ဝင်တေးပေါင်းမြောက်မြားစွာကို သီဆိုခဲ့ဖူးပါတယ်။ အဖွဲ့ထဲတွင်လည်း ပရိတ်သတ်အရေအတွက်အများဆုံးရှိသူ တစ်ဦးပါ။ Taeyeon ကို ၁၉၈၉ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၉ ရက်နေ့၊ Jeonju တွင် မွေးဖွားခဲ့ပြီး အကိုတစ်ယောက်၊ ညီမတစ်ယောက်ရှိပါတယ်။ ငယ်စဉ်ကတည်းက အဆိုကိုအထူးဝါသနာပါခဲ့သည့် Taeyeon ဟာ SM သင်တန်းကျောင်းမှာ လေ့ကျင့်ရေးဆင်းခဲ့ပြီး သူမရဲ့အသံအားအလွန်ကောင်းမှုကြောင့် သင်တန်းကာလမပြီးဆုံးခင်ကတည်းက SM Entertainment နှင့်စာချုပ်ချုပ်ဆိုနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ထိုမှတဆင့် ၂၀၀၇ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လတွင် Girls’ Generation အဖွဲ့ရဲ့ ခေါင်းဆောင်တစ်ဦးဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ သူမဇာတ်ဝင်တေး […]
[Zawgyi] တချို့ Idol တွေက သီချင်းဆိုတတ်၊ ကတတ်ရုံသာမက၊ ရုပ်ရည်လည်းချောမောကြသလို၊ အဖက်ဖက်ကနေ ထူးချွန်ကြပါတယ်။ K-Pop Idol တွေထဲက ရုပ်လည်းချောပြီး Geniuses ဖြစ်ကြတဲ့သူ (၈) ဦးကိုမျှဝေပေးချင်ပါတယ်။ ၁။ Park Kyung (Block B) Source: popcrush.com Park Kyung က IQ ရမှတ် ၁၅၆ မှတ်ထိရထားတဲ့ သူတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ ၂။ Eunwoo (ASTRO) Source: Officially Kmusic Eunwoo ဟာ လက်ရှိမှာတော့တောင်ကိုးရီးယားနိုင်ငံရဲ့ ထိပ်တန်း တက္ကသိုလ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Sungkyungkwan တက္ကသိုလ်မှာ ပညာသင်ကြားနေပါတယ်။ ကျောင်းမှာလည်း အဆင့် ၅ ချိတ်သူဖြစ်ပြီး အင်္ဂလိပ်စကားပြော စာမေးပွဲမှာလည်း ဆုတွေရရှိနေသူတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ ၃။ Hani […]
(Zawgyi Version) လူငယ်ကောင်မလေးတွေဆိုရင် ကလေးဆန်တဲ့ဖက်ရှင်လေးတွေနဲ့ အရမ်းလိုက်ပါတယ်။ ဖက်ရှင်ဆိုတာကလည်း အဝတ်အစားတစ်ခုထဲမဟုတ်ပဲ ဖိနပ်၊ အိတ်၊ စတာတွေအစ ကိုယ်ဝတ်ထားတာနဲ့ လိုက်ဖက်နေဖို့ လိုပါသေးတယ်။ ဒါမှဖက်ရှင်ကျပြီး ပိုချစ်စရာကောင်းနေမှာပါ။ ဒါဆိုရင် ဘယ်လိုဖက်ရှင်မျိုးက ကလေးဆန်ပြီး ပိုချစ်စရာကောင်းသွားစေမလဲဆိုတာကို ကြည့်လိုက်ရအောင်။ ရိုးရိုးဂါဝန်ထက် ဒီလိုနှစ်ထပ်ဂါဝန်လေးတွေက ပိုကလေးဆန်ပြီး ချစ်စရာကောင်းစေပါတယ်။ ဒီလိုဂါဝန်လေးတွေဝတ်ရင် Sneaker လေးတွေစီးတာ ပိုချစ်ဖို့ကောင်းပါတယ်။ စကပ်အတိုအကားလေးတွေဆိုလည်း အခုလိုအေးတဲ့အချိန်မှာ ဆွယ်တာအင်္ကျီလက်ရှည်လေးတွေနဲ့ တွဲဝတ်ပါ။ ခြေအိတ်လေးဝတ်ပြီး Sneaker လေးစီးရင်တော့ ပိုကလေးဆန်ပြီး ချစ်ဖို့ကောင်းတာပေါ့။ ဂငြျးဘောငျးဘီအတိုလေးတှကေို Crop Top, ကိုယျကပြျ, တီရှပျစတာလေးတှနေဲ့ တှဲဝတျပွီး Sneaker လေးစီးပါ။ ခွအေိတျဝတျမယျဆိုရငျလညျး ဖကျရှငျတဈခုဖွဈတာကွောငျ့ ကိုယျဝတျမယျ့ အငျ်ကြီအရောငျေလးနဲ့တူတဲ့အရောငျကို ရှေးဝတျရငျ ပိုခစြျစရာကောငျးပါတယျ။ အခုလိုအေးနေတဲ့အချိန်မှာဆိုရင် Hoodie အပွအကြီးကြီးတွေ၊ ဆွယ်တာအရှည်လေးတွေကိုဝတ်ပြီး […]
(Zawgyi Version) မနက်အိပ်ယာထနောက်ကျရင် ကျောင်းနောက်ကျ၊ အလုပ်နောက်ကျနဲ့ အဆင်မပြေတာတွေဟာ မနက်ခင်းမှာကတည်းက စဖြစ်တော့တာပါပဲ။ ဒါကြောင့် မနက်စောစောထနိုင်တဲ့ အကျင့်ဖြစ်အောင် ဘာတွေကို ပုံမှန်လုပ်ပေးရမလဲ? နှစ်ခြိုက်စွာနဲ့ ကောင်းကောင်းမွန်မွန် အိပ်စက်နိုင်ဖို့ဆိုရင် အိပ်ယာကို သန့်ရှင်းအောင်ထားဖို့က အရေးကြီးပါတယ်။ အိပ်ယာမသန့်ရင် ယားတာမျိုး၊ စိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်တာမျိုးတွေ ဖြစ်တတ်လို့ အိပ်ပျော်ဖို့ခက်ပါတယ်။ ကောင်းကောင်းအိပ်မပျော်မှတော့ မနက်လည်း စောစောမထနိုင်တော့ဘူးပေါ့။ ညဘက်ကိုစောစောအိပ်တတ်တဲ့ အကျင့်ဖြစ်အောင်လုပ်ပါ။ စောစောအိပ်ရင် အိပ်ရေးဝပြီး မနက်ဆို စောစောနိုးပါတယ်။ ဒါကြောင့် ၁၀ နာရီ ကိုနောက်ဆုံးထားပြီး အိပ်ပေးရင် အကောင်းဆုံးပါပဲ။ ၁၀ နာရီမှာအိပ်မယ်ဆိုရင် ၈ နာရီလောက်ထဲက ဖုန်းမသုံးပါနဲ့၊ ဂိမ်းဆော့တာ၊ ကွန်ပြူတာကြည့်တာမျိုးလည်း မလုပ်ပါနဲ့။ မအိပ်ခင် ၂ နာရီအလိုထဲက မျက်စိကို အနားပေးထားပါ။ ဖုန်းနဲ့ ကွန်ပြူတာကြည့်ရင် မျက်စိကြောင်ပြီး […]
ယုံကြည်မှု တစ်ခုအတွက် အမေစုကို ဝန်းရံဖို့ နယ်သာလန်ကို လိုက်သွားတဲ့ စမိုင်းလ်တို့ဇနီးမောင်နှံ …..
Zawgyi Font ဖြင့်ဖတ်ရန် သရုပ်ဆောင် စမိုင်းလ်တို့ ဇနီးမောင်နှံကတော့ သဲတစ်မှုန်စာလေးပဲဖြစ်ပါစေ ယုံကြည်မှုတစ်ခုအတွက် အမေစုကို ဝန်းရံပေးဖို့ နယ်သာလန်ကို သွားနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ ICJ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာတရားရုံးရဲ့ ကြားနာမှုကို နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစု ဦးဆောင်တဲ့အဖွဲ့ဟာ ဒီဇင်ဘာလ ၈ ရက်နေ့မှာထွက်ခွာသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဘန်ကောက်မှတဆင့် နယ်သာလန်နိုင်ငံ အမ်စတာဒမ်မြို့ကိုရောက်ရှိနေပြီး ICJ ရုံးတည်ရှိရာ သည်ဟိတ်မြို့ကို ပြန်လည်ထွက်ခွာပြီး ရောက်ရှိနေပြီလို့ သိရပါတယ်။ ICJ ကိုသွားရောက်မယ့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ ထောက်ခံပွဲကို မြန်မာနိုင်ငံတစ်ဝန်း အနယ်နယ်အရပ်ရပ်မှာ ပြုလုပ်နေကြပြီးတော့ ပြည်သူများကလည်း တစ်ဖက်တစ်လှမ်းမှ ရပ်တည် ဝန်းရံနေတာကိုလည်း တွေ့ရပါတယ်။ သရုပ်ဆောင် စမိုင်းလ်တို့ ဇနီးမောင်နှံကလည်း သူမတို့ရဲ့ ယုံကြည်မှုတစ်ခုအတွက် အမေစုကို ထောက်ခံဝန်းရံပေးဖို့ နယ်သာလန်နိုင်ငံ ထိသွားရောက်နေကြပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။ သူမကတော့ သဲတစ်မှုန်စာလေးပဲဖြစ်ပါစေ ဝန်းရံပေးဖို့ သွားရောက်တာလို့ […]
(၁) စိတ်ကိုတည်ငြိမ်စွာထိန်း၍ကြမ်းပြင်ပေါ်သို့မှောက်ချ လိုက်ပါ။ (၂) အိမ်ရှိမိသားစုဝင်အားလုံးသိရှိစေရန်အော်ဟစ်၍ အကြောင်းကြားပါ။ (၃) တံခါးပေါက်ရှိရာသို့လေးဘက်ထောက်(သို့) မိကျောင်းတက်အနေအထားဖြင့်အမြန်ထွက်ခွာပါ။ (၄) မိသားစုဝင်များအပြင်သို့ရောက်လျှင်တံခါးပြန် ပိတ်ပါ။ (၅) လွတ်မြောက်ရာနေရာသို့အမြန်ထွက်ခွာရင်း ပတ်ဝန်းကျင်မှသိရှိအောင်အကြောင်းကြားပါ။ (၆) မီးသတ်တပ်ဖွဲ့သို့အမြန်ဆုံးသတင်းပို့ပါ။ ပြည်သူများမီးခိုးအန္တရာယ်မှကင်းဝေးကြပါစေ UNICODE မီးခိုးအန္တရာယ်နှင့်ကြုံတွေ့လျှင်ဆောင်ရွက်ရ မည့်နည်းလမ်းများ (၁) စိတ်ကိုတည်ငြိမ်စွာထိန်း၍ကြမ်းပြင်ပေါ်သို့မှောက်ချ လိုက်ပါ။ (၂) အိမ်ရှိမိသားစုဝင်အားလုံးသိရှိစေရန်အော်ဟစ်၍ အကြောင်းကြားပါ။ (၃) တံခါးပေါက်ရှိရာသို့လေးဘက်ထောက်(သို့) မိကျောင်းတက်အနေအထားဖြင့်အမြန်ထွက်ခွာပါ။ (၄) မိသားစုဝင်များအပြင်သို့ရောက်လျှင်တံခါးပြန် ပိတ်ပါ။ (၅) လွတ်မြောက်ရာနေရာသို့အမြန်ထွက်ခွာရင်း ပတ်ဝန်းကျင်မှသိရှိအောင်အကြောင်းကြားပါ။ (၆) မီးသတ်တပ်ဖွဲ့သို့အမြန်ဆုံးသတင်းပို့ပါ။ ပြည်သူများမီးခိုးအန္တရာယ်မှကင်းဝေးကြပါစေ
အအေးလှိုင်းဖြတ်ချိန် အမျိုးသမီးတွေဟာ အမျိုးသားတွေထက်ပိုပြီး သွေးခဲနိုင်ချေ ပိုမိုမြင့်မားနိုင်…….
Zawgyi Font ဖြင့်ဖတ်ရန် အမျိုးသားတွေထက် အမျိုးသမီးတွေဟာ သွေးခဲနိုင်ချေပိုမြင့်မားတယ်။ deep vein thrombosis လို့ခေါ်တဲ့ သွေးပြန်ကြော သွေးခဲပိတ်ခြင်း ရောဂါဖြစ်နိုင်ချေ ပိုများတယ်ဆိုရင် အံ့သြသွားမလား..? ဒီကိစ္စက အမှန်ပါ။ နာတာရှည်သွေးပြန်ကြော ရောဂါတွေ၊ သွေးခဲတဲ့ ပြဿနာတွေ အမျိုးသားတွေမှာလည်း ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုပေမယ့် အမျိုးသမီးတွေမှာ တွေ့ရပိုများပါတယ်..။ သွေးခဲတာ ကြောက်စရာလိုလို့လားထိခိုက်ဒဏ်ရာ တစ်ခုခုရလို့ သွေးထွက်တဲ့အခါ ကိုယ်ခန္ဓာက သွေးခဲစေပြီး သွေးတိတ်အောင် လုပ်ရပါတယ်..။ ဒါကကောင်းတဲ့ ကိစ္စတစ်ခုဖြစ်ပေမယ့် deep vein thrombosis လို့ခေါ်တဲ့ သွေးပိတ်ကြောပိတ်တဲ့ ပြဿနာမှာတော့ ဒီသွေးခဲတဲ့ ကိစ္စက တရားခံပါ..။ ဒါတင်မက ခဲနေတဲ့ သွေးခဲလေးတွေပြုတ်ထွက်ပြီး အဆုတ်သွေးကြော နှလုံးသွေးကြောတွေမှာ သွားပိတ်ရင် ပိုပြီး ပြဿနာကြီးသွားပါပြီ..။ ဒီလောက် ကြောက်ဖို့ကောင်းတဲ့ ပြဿနာတွေက […]
၉ တန်း ကျောင်းသူလေး တွေရဲ့ မိဘများအတွက် ရင်နင့်စရာ ဖြစ်ရပ်တစ်ခု
Zawgyi Font ဖြင့်ဖတ်ရန် ၉ တန်း ကျောင်းသူလေး တွေရဲ့ မိဘများအတွက် ရင်နင့်စရာ ဖြစ်ရပ်တစ်ခု မိန်းကလေးတယောက်ဆို အကျီ ကြယ်သီးပါပြုတ်နေတယ် သူတို.ကို ဘာဖြစ်တာလဲလို. လှမ်းမေးတော့ ကောင်လေး တစ်ယောက်ကထမင်းစားချိန် ဆိုင်သွားဖို. ဖြတ်လမ်း ကြား ကနေ အဖြတ် ကိုးတန်း ကလေး မိန်းကလေး ငါးယောက် ကို တယောက် စီ ကောင် လေး လေးငါးယောက် လောက် က တွဲပီး လမ်းလျောက်လာ ကြတာ တာတွေ.လိုက်တယ် မိန်းကလေး တွေ ခြေလှမ်းက ယိမ်းယိုင်နေပီးတော့ လမ်းတောင်ကောင်းကောင်း မလျောက်နိုင်ကြတော့ဘူး .. မိန်းကလေးတယောက်ဆိုအကျီ ကြယ်သီးပါပြုတ်နေတယ် ။သူတို.ကို ဘာဖြစ်တာလဲလို. လှမ်းမေးတော့ ကောင်လေး တစ်ယောက်က အစာ အဆိပ်သင့်တာပါလို. […]
Previous 1 … 1,600 1,601 1,602 … 1,611 Next